ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်Հուլիս 2020စက်ရုပ်နှင့်ဓာတ်ရောင်ခြည် : ခေတ်မီသိပ္ပံပညာဖြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ မည်သို့ဖြတ်ထုတ်သနည်
հուլիսի 22, 2020 CancerExcellenceMadePossibleHorizonCancer
စက်ရုပ်အကူအညီဖြင့် da Vinci ခွဲစိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် Da Vinci® Prostatectomy သို့မဟုတ် စက်ရုပ်ဖြင့်ဆီးကျိတ်ဂလင်း ခွဲစိတ်ခြင်း (Robotic Prostatectomy) သည် ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အလွန်အနုစိတ်ကင်မရာများဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသသည့်နေရာမှ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအနီးကပ်ပုံကို ဆရာဝန်များအတွက် ရရှိနိုင်သည်။ လူသား၏ လက်နှင့် လက်ကောက်ဝတ်လှုပ်ရှားမှုကို တုပထားသည့် စက်ရုပ်လက်တံများသည် ဆရာဝန်အတွက် တိကျပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု ရှိစေသည်။ အခြားအလားတူ အရေးပါသော ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ ဓာတ်ရော င်ခြည်ကုထုံး (brachytherapy) ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သောဖန်ပြွန်မှတဆင့် ကင်ဆာအသားပိုသို့ ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ပေးမှုထဲ့သွင်းခြင်း ပါဝင်သည်။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားသောအသားပိုသို့ မြင့်မားသော ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်ပြီး ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်သို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျရောက်မှု နည်းပါးစေသည်။
ဆီးကျိတ်ဂလင်းသည် အမျိုးသားမျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးစနစ်၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်မှ လူကြီးပိုင်းရောက်ပါက ကြီးထွားမှု ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက်ကြီးထွားသည့် ထူးခြားသည့်လက္ခဏာရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဆီးကျိတ်သည် အလွန်ကြီးထွားလာပါက ပြဿနာရှိနိုင်သည်။ ရိုးရိုးသာမန်ဆီးကျိတ် ကြီးထွားမှု (ညင်သာပျော့ပြောင်းသောဆီးကျိတ်ကြီးထွားခြင်း) အတွက် နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများသည် အလွန်စိတ်အနှောင်အယှက် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသားလူကြီးပိုင်းတွင် ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်သည့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိပါက ၄င်းသည် အလွန်စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းများအရ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည် ရောဂါရင့်သည့်အဆင့်တွင် အများဆုံးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး ကုသမှု ခက်ခဲနက်နဲသည်။
မြန်ဆန်သောရောဂါစစ်ဆေးခြင်းသည် ကုသမှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အထူးအထောက်အကူပြုသည်။ အမေရိကန်ကင်ဆာ အဖွဲ့အစည်းမှ အချို့သောအသက်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားများအား ၄င်းတို့၏သွေးတွင် PSA အဆင့်ကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရန် အကြံပြုသည်။ PSA စစ်ဆေးခြင်းနှင့် PSA စစ်ဆေးချက်ရလာဒ်ဆိုလိုချက်အကြောင်း ပိုမိုနားလည်စေရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Bumrungrad ဆေးရုံ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဌာန အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ Charuspong Dissaranan ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေခဲ့သည်။
PSA စစ်ဆေးခြင်းရည်ရွက်ချက်နှင့် PSA စစ်ဆေးချက်ရလာဒ်ဆိုလိုချက်သည် ဘာလဲ?
ဒေါက်တာ Charuspong: ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိကြောင်းဖော်ပြနိုင်သော ပရိုတိန်းစစ်ဆေးရန် PSA စစ်ဆေးမှု ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည် ရောဂါနုသည့်အဆင့်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ ပြသခြင်း မရှိပါ။ PSA စစ်ဆေးခြင်းသည် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အဓိကညွှန်းကိန်း တိုင်းတာရန်အတွက် ထိုးဖောက်မှုမရှိသည့်နည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း PSA အဆင့် တစ်ခုတည်းဖြင့် ကင်ဆာရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
အမျိုးသားများသည် PSA စစ်ဆေးမှု အကြိမ်မည်မျှ ပြုလုပ်သင့်သနည်း?
ဒေါက်တာ Charuspong: “အသက် ၅၀ နှစ်နဲ့အထက် အမျိုးသားများ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ရလာဒ်က ပုံမှန်အတွင်းရှိရင် သင့်ဆရာဝန်က ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲများကို စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ ရောဂါနုတဲ့အချိန်ကစပြီး အမြစ်ဖြတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ခြောက်လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးဖို့ သင့်ဆရာဝန်မှ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။”
ကျွန်ုပ်၏ PSA အဆင့်သည် မြင့်မားပါက ဘာဆက်လက်လုပ်ရမည်နည်း?
ဒေါက်တာ Charuspong: “စစ်ဆေးချက်ရလာဒ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်နာရီအတွင်း ရနိုင်ပါတယ်။ PSA အဆင့် မြင့်မားပါက ဆီးကျိတ်နေရာနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကို အသေးစိတ်ပုံရရှိဖို့ စကင်ဖတ်တဲ့ MRI ရိုက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ MRI က ပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေနောက်တစ်ဆင့်က ကင်ဆာဆဲလ်တည်ရှိမှုစမ်းသပ်မဲ့ တစ်သျှူးအသားစနမူနာ ရယူဖို့ MRI အယ်ထရာဆောင်းဖျူးရှင်း စစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။”
စစ်ဆေးမှုအကြောင်း ရှင်းပြပြီးနောက် နောက်ထပ်မေးခွန်းမှာ ကုသမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုရွေးချယ်စရာများမှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး၊ ဓာတုကုထုံး သို့မဟုတ် ဟော်မုန်းကုထုံးများ ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါအဆင့် သို့မဟုတ် တိုးတက်မှုအပေါ်မှာ မူတည်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ဆီးကျိတ်ဂလင်းထုတ်ယူခြင်း (ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်ခြင်း) ခွဲစိတ်မှုသည် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက် အထိရောက်ဆုံးကုသမှုတစ်ခု ဖြစ်နေသေးသည်။ လက်ခံမှုအများဆုံးရရှိသည့် ခွဲစိတ်မှုနည်းလမ်းသည် laparoscopic ကင်မရာထည့်၍ ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဆရာဝန်သည် ရှည်လျားသေးသွယ်သောပြွန် (laparoscope) တွင် အလွန်သေးငယ်သော ကင်မရာထည့်၍ ဖန်မျက်နှာပြင်တွင် မြင်ရသည့်ပုံများမှတဆင့် အလွန်သေးငယ်သောကိရိယာများဖြင့် ခွဲစိတ်မှု လုပ်ဆောင်သည်။ လူနာသည် ဤခွဲစိတ်မှုအမျိုးအစားပြုလုပ်ပြီးနောက် ပြန်နလန်ထူနိုင်ရန် ဆေးရုံ သုံးရက်ခန့် တက်ရသည်။
သို့သော်လည်း ပိုအသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုထိရောက်သောခွဲစိတ်ကုသမှုနည်းလမ်းသည် ယခုအခါ ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမှာ စက်ရုပ်အကူအညီဖြင့် da Vinci ခွဲစိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ရုပ်ဖြင့်ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်ခြင်း (Robotic Prostatectomy) ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသမှုတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိသော Bumrungrad အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံမှ ဆီးကျိတ်ပါဂူဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Teerapon Amornvesukit မှ ရှင်းပြရာတွင် အဖွင့် သို့မဟုတ် စံ (စက်ရုပ်မဟုတ်သော) ကင်မရာထည့်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စနစ်မှ 3D ပုံသည် ဆရာဝန်များအား ပိုမိုတိကျသေချာစွာ ခွဲစိတ်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။
အလွန်အနုစိတ်ကင်မရာများဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသသည့်နေရာမှ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအနီးကပ်ပုံကို ဆရာဝန်များအတွက် ရရှိနိုင်သည်။ လူသား၏ လက်နှင့် လက်ကောက်ဝတ်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလှုပ်ရှားမှုဖြင့် တုပထားသည့် အလွန်သေးငယ်သော ခွဲစိတ်ကုသရေး ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသော စက်ရုပ်လက်တံများသည် ဆရာဝန်အတွက် တိကျပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူစေသည်။ ၄င်းသည် ကင်မရာထဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် နာကျင်မှုနည်း၍ နာလန်ထူချိန်ပိုမိုလျှင်မြန်သည့် ကောင်းကျိုးများရှိသည့်အပြင် ခွဲစိတ်မှုနောက်ပိုင်း ဆီးမထိမ်းနိုင်မှု သို့မဟုတ် လိင်တံမသန်မာမှုပြသနာများကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။
အခြားအလားတူ အရေးပါသော ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး (brachytherapy) ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သောဖန်ပြွန်မှ တဆင့် ကင်ဆာအသားပိုသို့ ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ပေးမှုထဲ့သွင်းခြင်း ပါဝင်သည်။ ကင်ဆာဖြစ်ပွားသောအသားပိုသို့ မြင့်မားသော ဓာတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက် ကျရောက်ပြီး ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်သို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျရောက်မှု နည်းပါးစေသည်။ Horizon ကင်ဆာဌာနမှ ဓာတ်ိရောင်ခြည်နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကျွမ်းကျင်ပါရဂူ ဒေါက်တာ Apichart Panichevaluk မှအောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
“မြင့်မားသောဓာတ်ရောင်ခြည်နှုန်း (HDR) ဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးမှာ ကျနော်တို့ ကင်ဆာတစ်သျှူးထဲသို့ ကြိုတင်တွက်ချက်ထားတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည် မလွှတ်မီ Transrectal Ultrasound (TRUS) လမ်းညွှန်အသုံးပြုပြီး ဆီးကျိတ်ထဲကို အလွန်သေးငယ်တဲ့ပြွန် တိုက်ရိုက် ထဲ့ပါတယ်။ ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကိရိယာတွေ ပြန်ထုတ်ပါတယ်။ ဘာမှ မကျန်ပါဘူး။ အားသာချက်က ပြွန်ချောင်းက လူနာထဲမှာ ရှိနေစဉ် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကို အမြဲညှိနိုင်ပါတယ်။ HDR က အန္တရာယ်အလတ်စားမှ အန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအထိ အောင်မြင်မှုနှုန်း ၉၀% ကျော်ဖြင့် အလွန်ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကလဲ အခြားကုသနည်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက အတော်လေး နဲပါးပါတယ်။”
အန္တရာယ်နဲပါးသော ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက် အမြဲတမ်းထည့်သွင်းကုသခြင်းသည် ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ရောင်ခြည်ကုထုံး ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်အား ကင်ဆာအသားစအတွင်း အမြဲတမ်းထည့်သွင်းကုသသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်လွှတ်ပေးသောအရာသည် နှမ်းစေ့အရွယ်ခန့် ရှိပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုန်သွားသည်အထိ အလွန်နဲပါးသည့်ရောင်ခြည် တဖြည်းဖြည်း ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ပေးသည့်အရင်းအမြစ်သည် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုန်သွားသည်အထိ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားသော အသားစအတွင်း အမြဲတမ်း တည်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏနှုန်း တိကျစွာ တွက်ချက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်။
ရွေးချယ်ရန် ကုသမှုနည်းလမ်း ရှိပါသေး ပုံရိပ်လမ်းညွန် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး (IGRT) သည်ပုံမှန်လုပ် နေကျဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပရောင်ခြည်ပေးဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးမှ ထပ်ဆင့် နည်းပညာ မြင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရောဂါအခြေအနေမဆိုးဝါးသော ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလူနာများအား ၉၀ % မျှကုသအောင်မြင်မှုနှုန်း ရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာ ရွေအစစ်ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သည့်အဆံ ၃ စေ့ အား(Gold Fiducial Markers) အမှတ်အသား အနေဖြင့် ဆီးကျိတ်၏အတွင်းသို့ ထည့်ပါသည်။ ထိုနောက်လူနာအား စက်ဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပါသောဆေးပေး ပါသည်၊ တဆက်တည်း CT ရိုက်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းမှရှိနေသော အစေ့အဆံ ၃ စက်သည် ပုံရိပ်တွင် ထင်ပေါ်နေပြီး၊ ဆရာဝန်အား အကျိတ်ရှိနေသော နေရာအားအတိအကျ ချိန်ဆနိုင်စေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အကျိတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကောင်းသော တစ်သျှူးများပျက်စီးခြင်းကို လျော့နည်းစေပြီး၊ ယခင်ကုထုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါလျှင် ကုသမှုတလျောက်ကြာမြင့်ချိန်ပို၍တိုတောင်းစေပါသည်။
Horizon ဒေသဆိုင်ရာကင်ဆာဌာနမှ ဆရာဝန်များသည် ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် စက်ရုပ်ခွဲစိတ်ကုသရေးဌာနနှင့်အတူ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားသောအသားစ အရွယ်အစား၊ တည်ရှိသည့်နေရာနှင့် ရောဂါအဆင့်တို့ကို လူနာကုသရေးအစီအစဉ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသော အချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ အသိပေးခြင်း၊ သတိပြုခြင်း၊ ပုံမှန်ဆေးစစ်ခြင်းတို့သည် အစစအရာရာအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည့်နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်များ၏ အသိပညာကြွယ်ဝမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့သည် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအား ယခင်ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြောက်စရာအလွန်နဲပါးသည့် ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။